Their names have good omens or meanings.Name of flowers are given to names of girls,for
instance,the name of the spouse of the German Ambassador to Myanmar is Ma Hninsi,
Ms.Rose.Some are given the names of singing birds,such as Ma Gyogyar,Miss Crane.
Some are given the names of pali,for example,Maung Thura,Maung Taeza,Maung Thiha,
Ma thida,Ma Sanda and etc.
Maung Thura means brave one.
Maung Taeza means brilliant like sun.
Maung Thiha means lion-hearted one.
Ma Thida means cool like water.
Ma sanda means cool likeamoon.
myatnoe 14 April 2008 at 08:20
သူရ.. သည် တကယ် သတ္တိမရှိခဲ့သော် .. ထိုနာမည်နှင့်လူသည်.. အကျိုးမပေး။
သူရနောက်တွင် ကပ်သော နာမည်သည်လည်း အရေးကြီးသည်။
သီဟ သည် ခြင်္သေ့ .. ထိုကလေးများ လူဆိုးများ ကြသည် ကိုလည်း မမေ့အပ်။
သူရိန် သည် နေမင်း မီ်းလိုပူပြင်းလှသည်။
စန္ဒာသည် လ အေးမြခြင်း အမည်ပိုင်ရှင်စန္ဒာသည် မအေးမြပဲ အရမ်းသွက်လက်နေပါက သည်နာမည်သည် ခိုက်စေသည်။
နာမည်နှင့်ပက်သက်၍ ခိုက်သည် ကောင်းသည်မှာ အမြဲ ဒွန်တွဲနေတတ်၍ မွေးဖွားသည့် ကလေး၏ ဇာတာ နှင့် အလေ့အကျင့်စရိုက်ကို သိရှိပီး အကောင်းဆုံးနာမည်ရွေးခြင်းသည်သာ ပို၍ ကောင်းမွန်ပါသည်။
ထိုအရာသည် ဗေဒင် ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်မိသမျှပြောပြယုံသက်သက်သာ..ဖြစ်ကြောင်း
ရွှေပြည်သူ 14 April 2008 at 20:41
အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတွေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်းရေး)
HEARTMUSEUM 15 April 2008 at 08:03
မမေရေ... ရေးလှချေလားဟ.... တခြားသုတွေတော့မသိ
(၁) ဟီ ...ဟိ ဒီမှာငါ့နာမည်ကို ဘယ်သူမှမှန်အောင် မပေါင်းနိုင်သလို ၊ အသံလည်းမှန်အောင် မထွက်တတ်ကြဘူးဟ။
(၂) ရှေ့နာမည်နဲ့ နောက်နာမည် အတူတူဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကလည်းမသေးပေဘူးဟ။